Pendi yezvidhinha kana yevaravara "haiparadzi" mwenje wakaringana? - MediaLight Bias Chiedza
Pendi yezvidhinha kana yevaravara "haiparadzi" mwenje wakaringana?
Tinowana uyu mubvunzo zvakanyanya, uye ini ndoda kupa mamwe maonero.
Kutanga, rega ndingo taura kuti kana iwe uri wekutapa vhidhiyo vhidhiyo, iwe unonyatsoda kuve neyakanyanya kutonga pamusoro penzvimbo iwe yaunogona kuve nayo. Izvi zvinosanganisira kupenya-kwakapetwa pendi uye kudzora mwenje - kureva kuti hapana kusvibiswa kwechiedza kubva kumahwindo, kupenya kwekuratidzira kwe LED pane zvishandiso, nezvimwe.
Zvino, neizvozvo kunze kwenzira iyoyo, pane nguva dzakakwana apo izvi zvisingaite, uye vazhinji vemavara vakandiudza nezvekushanda kunze kwemakamuri ehotera kana, nguva pfupi yadarika nekuda kwedenda, kubva kumba.
Ndinoda kunongedzera zvishoma zvinhu izvo vazhinji vedu intuitively vanoziva:
Isu hatiratidze TV kuti iite ruvara rwependi mumba. Isu tinozvienzanisa neD65, inova ndiyo chena poindi yechiedza.
Ruvara rwependi harukanganise ruvara rwechiedza zvakanyanya asi iwo ruvara rwechiedza runokanganisa kunyatso tarisa kwarwo kwatiri.
Funga nezve kirabhu yehusiku kana pati ine mwenje yakajeka. Pane musiyano mukuru pakati pekuve mune chena kamuri ine mwenje mutsvuku uye mutsvuku-pendi kamuri ine chena mwenje. Madziro angaite kunge anotaridzika zvakafanana, asi zvese zviri mumba zvinotaridzika zvakasiyana zvakanyanya.
Zvichitaurwa zviri nyore, pasi pemarambi matsvuku, zvese zviri mumba muno zvinoita kunge zvakatsvuka. Ganda rako rinoita serakatsvuka, hembe dzako dzinoita sedzakatsvuka, uye zvimwe zvese zviri pasi pemarambi matsvuku zvinotaridzika kutsvuka.
Kune rimwe divi, kana isu tiri mukamuri ine pendi tsvuku uye chena mwenje sosi, izvi hazvizove zvakadaro (kunze kwekunge madziro aine akakwirira kwazvo kufungidzira - funga girazi-dzvuku-girazi kana kunyange pendi tsvuku yakajeka, kunge mota yemitambo).
Iwe unogona kutomira padyo padyo nemadziro matsvuku uye uine mwenje chena kubhururuka pamusoro pako uye uchaita vachiri usatarise kutsvuka (kunze kwekunge uine kupisa kwezuva kwakanyanya).
Ndiri kuzokurukura zvinhu zviviri zvakasiyana. Yekutanga inonzi chromatic adaptation uye yechipiri inopikisana-process color color.
Isu tinowirirana neruvara rwechiedza chakatikomberedza nekukurumidza kuburikidza nemaitiro anonzi chromatic adaptation uye ndiwo maitiro akasiyana kubva muvengi-nzira Ruvara (vhiri vhiri) dzidziso. Zvese izvi zvinhu zvirikuitika, asi chromatic adaptation yakakwenenzvera chinzvimbo kana uchiona yekutumira kuratidza, seTV kana monitorera.
Chaizvoizvo, isu tinotarisa TV tisingachinje kona yedu kazhinji, saka anopikisa-maitiro haanyatso kukanganisa mufananidzo nekuti kana ukajaira kumadziro ebhuruu, ari kunyanya kukanganisa maonero ako kumativi iyo skrini uye kwete iyo skrini pachayo.
Kupfuura iro ruvara rwependi, iwe unenge uchizoenderana neruvara rwechiedza mukamuri kubva pamwenje wekusarura sechiedza chega chega.
Funga nezve izvi: Iko pendi inokanganisa zvakadii TV nemamwe magetsi? Izvi hazvisi zvakasiyana. Chiedza chakasarudzika chemwenje hachifanirwe kunge chiri chinhu kunze kwechiedza chinobva chechena poindi munzvimbo yakanakisa.
Pane zvinhu zvakasiyana zvinoitika kana tichiona TV mukamuri riine mwenje.
Anopikisa maitiro color dzidziso - Muenzaniso: Vashambadziri vanoisa mavara egirini patomatisi muto kuti muto uwedzere kutsvuka / kuibva. Tarisa pamufananidzo wemureza weAmerica kwemasekondi makumi matatu uye wotarisa kure uye isu tinoona invers yekuteedzera.
Chromatic kuchinjika - Isu tinoenderana nekuvhenekera kwedu. Kana ndikatarisa foni yangu pasi pe3000K incandescent bulbs kana mwenje wemwenje, iyo skrini inotaridzika iri bhuruu pasi pechiedza chinodziya uye inotaridzika magenta pasi pehunhu hwakaderera, greenish mwenje. Kana iwe uine chinyowani Apple apple chishandiso, batidza truetone kuvhura uye kudzima kuti uone kuti foni (uye iwe) inoenderana sei nekuvhenekera, kwete kune iro ruvara rwemachira kana pendi mumba.
Metamerism index / Yakadzika CRI (color rendering index) magetsi matsva - Isu tinoona zvisina kunaka mune yakaderera CRI mwenje. Tinogona kuona zvirinani pasi pechiedza, chakakwirira CRI mwenje pane inopenya yakaderera-CRI mwenje. Funga nezve kutadza kufambisa masokisi ebhuruu uye nhema pasi pechiedza chakaipa.
Tarisa uone machena machena anobuda pamadziro ako ebhuruu padenga jena. Iwe hausi kuona kuratidzwa kwebhuruu padenga. Izvi zvakasiyana zvakanyanya kana iwe ukaratidzira mwenje webhuruu kubva pamadziro ebhuruu kana chena padenga jena.
Ruvara rwependi harune hushoma pane rwechiedza. Izvi zvine musoro. Isu hatiratidze TV kuti iite ruvara rwependi mumba. Isu tinozvienzanisa neD65, inova ndiyo chena poindi yechiedza.
Kana isu tikaedza "kugadzirisa" ruvara rwemadziro nekukwenenzvera mwenje mutsvuku kubva pamadziro ebhuruu, isu hatinyatso kuve grey (iyo tsvuku nzvimbo yaisataridza mwenje webhuruu. Panzvimbo iyoyo, iwe unowana rima). Nekudaro, pendi haina kungoita mutsvuku kana bhuruu. Izvo zvine musanganiswa we pigments. Kana isu tikaedza kugadzirisa ruvara rwemasvingo neruvara rwunopikisa, tinozopedzisira tagezwa nemwenje usiri iwo uye tozopedzisira tajaira kwairi, tichiita kuti kuratidzwa kwacho kutaridze kunge kwakashata.
Yese iyi inzira refu yekureva kuti kana uine beige, hupfu yeyero, girini yakajeka kana bhuruu madziro, zvine kushamisika kushoma kukanganisa pane chena poindi yechiedza mumba. Uye, kana iwe uine mavara emadziro, sezvinoita vanhu vazhinji, mwenje chaiyo icharamba ichiyera padhuze neD65 kubva paungave wakagara.
Nekudaro, kana iwe uchikwanisa kupenda madziro grey, zvinonyatsoita kuti yako iratidzike kupenya, uye kana iwe uri nyanzvi colorist, iwe zviripachena unoda yakanyanya kutonga pamusoro penzvimbo yako, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Varairidzi vanopedza yakawanda nguva vachiongorora imwechete furemu yechiitiko nepo vazhinji vedu vari kumba vasinganyatso kumanikidza kumbomira uye kutarira chimwe chinhu kwenguva refu.
Iyo pendi yegrey inopa imwe nhanho yekuwongorora iyo inodiwa nemuvara. Izvi zvinotsanangurawo nei kupenya kwakakurudzirwa kwevashandi nevatengi kwakasiyana.
Iyo yakakurudzirwa kupenya kwekusarudzika mwenje kunogona kusiana zvichienderana nemushandisi. Nepo nyanzvi dzekugadzira dzichiwanzofarira denderedzwa rakakomberedza nekupenya kwakadzikira (4.5-5 cd / m ^ 2) nekuti zvinovabatsira kuti vaone zvakanyanya kupfuura nematanho emwenje epamusoro, vatengi vanowanzo farira marongero epamusoro-kupenya (10% yekupenya kwakanyanya kwe chiratidziro) pavanenge vakatarisa yavo yavanofarira nhevedzano kumba nekuti izvi zvinoita kuti mavara anyatsooneka uye anovandudza anoonekwa matanho madema.
Previous nyaya Ndeipi kureba kwekusarudzika mwenje yandinoda yeTV yangu?
inotevera Kushungurudzika Kwemaziso uye OLED: Chokwadi ndechekuti Zvakanyanya